လုပ်သားနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ | ဒစ်ဂျစ်တယ် တာဝန် | ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးများ | Samsung Myanmar
ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော ထုတ်ကုန်မျာ
ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော လုပ်ငန်းခွင
ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြင့်မားဆုံး စံနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ကြိုးပမ်းပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတိုင်းခံစားခွင့်ရှိသည့် လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် အခြေခံအခွင့်အရေးများကို လေးစားပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် လျှောက်လွှာတင်သူအားလုံးအတွက် တန်းတူညီသော အခွင့်အလမ်းများကို သေချာစေပြီး မည်သည့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပုံစံကိုမျှ သည်းမခံပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ လွတ်လပ်စွာ သင်းဖွဲ့ခွင့်ကိုလည်း လေးစားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းမှုကွင်းဆက်ရှိ လူများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပြီး ထောက်ခံအားပေးရန်အလို့ငှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် လေးစားမှုကို မြှုပ်နှံထည့်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းပါသည်။
လုပ်သားနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ်မှတ်ချက်ဘောင်
စီးပွားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ (UNGPs) ဆိုင်ရာ UN လမ်းညွှန်းမူများကို ထောက်ခံအားပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ဆိုးရွားသော လူ့အခွင့်အရေး သက်ရောက်မှုများကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ရန်၊ တားဆီးရန်၊ လျော့ပါးစေရန်နှင့် ဖြေရှင်းရန် လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် ကန့်သတ်ချက်ဘောင်ကို ချမှတ်ထားပြီး စွဲကိုင်ထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမအဆင့် ပေးသွင်းသူများသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ပင် အလားတူသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အန္တရာယ်များကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ကြောင်း သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားအားထုတ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏ ပေးသွင်းသူများ သို့မဟုတ် Samsung ထံ ပေးသွင်းသူအခွဲများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်း မူဝါဒများနှင့်တူညီသော အဆင့်ကို ကျင့်သုံးပါရန် အသိပေးထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်သား ကိစ္စရပ်များ (GLI) ကော်မတီသည် လုပ်သားနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများနှင့် အန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ လုပ်သားနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးရန် နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် စုဝေးတွေ့ဆုံသည့် GLI ကော်မတီတွင် လုပ်ငန်းဌာနခြောက်ခု (လူသားရင်းမြစ်အဖွဲ့၊ ဥပဒေရုံးခန်း၊ မိတ်ဖက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စင်တာ၊ ကော်ပိုရိတ်ရေရှည်တည်တံ့ရေး စင်တာ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ EHS စင်တာ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဆက်ဆံရေး အဖွဲ့) မှ အမှုဆောင်များနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။ အရေးကြီးကိစ္စတိုင်းကို အဓိက အမှုဆောင်များ ပါဝင်သည့် ရေရှည်တည်တံ့ရေး ကောင်ဆီသို့ ထပ်ဆင့်တင်ပြပြီးနောက် ထိပ်တန်း စီမံခန့်ခွဲရေးသို့ သတင်းပေးပို့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြေညာချက်၊ လုပ်ငန်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လမ်းညွှန်မူများ (UNGPs)၊ နိုင်ငံသားစုံပါဝင်သော လုပ်ငန်းစုအတွက် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်း (OECD) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ကလေးသူငယ်များ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ UN သဘောတူညီချက် (UNCRC)၊ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း (ILO) ၏ အလုပ်ခွင်တွင်း အခြေခံမူများနှင့် အခွင့်အရေးများ ကြေညာချက်တို့အပေါ် အခြေခံ၍ ပြည့်စုံခိုင်မာသော အလုပ်သမားနှင့် လူ့အခွင့်အရေး မူဝါဒတစ်ခုကို ချမှတ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တာဝန်ယူသော လုပ်ငန်း မဟာမိတ် (RBA) ၏ လုပ်ငန်စည်းကမ်းကို လိုက်နာပြီး ကျွန်ုပ်တို့ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံများ၏ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစည်းကမ်းနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ
ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပို၍တာဝန်ယူတတ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည့် ‘ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစည်းကမ်း’ နှင့် ‘လုပ်ငန်းစည်းကမ်း လမ်းညွှန်ချက်များ’ ကို လိုက်နာရပါမည်။
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစည်းကမ်း (284 KB)
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်- လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု လမ်းညွှန်ချက်များ (110 KB)
အားနည်းချက်ရှိသော လူအုပ်စုများကို ကာကွယ်ရန် ရည်စူးထားသည့် မူဝါဒအစုံလိုက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖန်တီးရေးသားပြီး ကျင့်သုံးပါသည်။
ကလေးလုပ်သား တားမြစ်ရေး မူဝါဒ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျောင်းသား လုပ်သား မူဝါဒ
အိန္ဒိယတွင် အလုပ်သင်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ
နှောင့်ယှက်မှု ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့ မူဝါဒများကို နောက်ထပ် ရှာဖွေပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ လူ့အခွင့်အရေး မူဝါဒများကို လိုက်နာခြင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ လေးစားလိုက်နာမှုဆိုင်ရာ သိရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အလုပ်ခွင်တစ်ခုစီအတွက် သီးသန့် သင်တန်းပရိုဂရမ်များ ဝန်ထမ်းများကို ပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။ UN အေဂျင်စီများအပြင် လုပ်ငန်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေးရေးတွင် ကျွမ်းကျင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍၊ အလုပ်တာဝန်များအတွက် သီးသန့် သင်တန်းပို့ချပေးခြင်းဖြင့် လုပ်သားနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ခေါင်းစဉ်များကို ဖတ်ရှုနားလည်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးရန် ကြိုးစားနေပါသည်။ BSR နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဝန်ထမ်းများအားလုံး၏ အလုပ်တာဝန်များအတွက် သီးသန့်ဖြစ်သည့် သင်တန်းအချက်အလက်ကုန်ကြမ်းများ ဖန်တီးရေးသားပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2020 တွင် ပြည့်စုံကျယ်ပြန့်သော လုပ်သားနှင့် လူ့အခွင့်အရေး သင်တန်း ပရိုဂရမ်ကို စတင်ပို့ချခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအလိုက် စိတ်ကြိုက်သင်တန်း ပို့ချပေးရန် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ခွင်များနှင့် ပေးသွင်းမှုကွင်းဆက်တွင် လူ့အခွင့်အရေး အန္တရာယ်များကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ပြီး စောင့်ကြည့်ရန်အလို့ငှာ ကုမ္ပဏီတွင်းနှင့် ပြင်ပ လုပ်ထုံးများ ထည့်သွင်းထားသည့် စနစ်တစ်ခုကို အသုံးချလုပ်ဆောင်ပါသည်။
လုပ်သားနှင့် လူ့အခွင့်အရေး လေးစားလိုက်နာမှုအဆင့်ကို အကဲဖြတ်ပြီး မတူညီသော လုပ်ထုံးသုံးခုဖြစ်သည့် RBA အလုပ်ခွင် စိစစ်မှု၊ Samsung Electronics ကုမ္ပဏီတွင်း အန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေး သက်ရောက်မှု အကဲဖြတ်မှု (HRIA) ကို အသုံးချ၍ တိုးတက်မှုအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။
တာဝန်သိသော လုပ်ငန်း မဟာမိတ် အလုပ်ခွင် စိစစ်မှု
တာဝန်သိသော လုပ်ငန်း မဟာမိတ် (RBA) ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် RBA လုပ်ငန်းစည်းကမ်းကို အလုပ်ခွင်စီမံခန့်ခွဲရေးတွင် အသုံးချပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ခွင်များ၏ RBA SAQ (ကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်မှု စစ်တမ်းမေးခွန်းလွှာ) ၏ ရလဒ်များပေါ် အခြေခံ၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့အနက် ခြောက်ခု သို့မဟုတ် ခုနစ်ခုကို နှစ်စဉ် ရွေးချယ်ပြီး အဆိုပါ အလုပ်ခွင်များရှိ လုပ်ကိုင်ရေးပတ်ဝန်းကျင် အန္တရာယ်များကို ခွဲခြားသိရှိရန် RBA အလုပ်ခွင် စိစစ်မှု ပရိုတိုကောလ်ကို အသုံးချပါသည်။ RBA သည် လုပ်သား၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျင့်ဝတ်များအပြင် စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိစစ်မှုများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ တစ်ခုခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက အလုပ်ခွင်များသည် တင်ပြမည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်ကို ချမှတ်ပါမည်။
Samsung Electronics ကုမ္ပဏီတွင်းအန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်
01. အကဲဖြတ်မှု ပစ်မှတ်များကို ရွေးချယ်ပါ
လုပ်နိုင်စွမ်းများ တိုးလာစေရန် လိုအပ်သည့် အလုပ်ခွင် ခြောက်ခုမှ ခုနစ်ခုကို နှစ်စဉ် ရွေးချယ်ပြီး စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်၏ အကဲဖြတ်မှု ရလဒ်များပေါ် အခြေခံ၍ အလုံးစုံ တိုးတက်မှုများ ပြုလုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ခွင် စောင့်ကြည့်ရေး စနစ်
၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်အကိုင် ပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်ခွင် အစဉ်အလာ၊ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့များနှင့် ပေးသွင်းသူများ၏ စီမံခန့်ခွဲရေး အစရှိသည်တို့ကို အကဲဖြတ်ရန် စောင့်ကြည့်စနစ်အဖြစ် လုပ်သားနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ စံနှုန်းများနှင့် လေးစားလိုက်နာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု တည်မြဲရေးကို ပံ့ပိုးသည်။
02. စိစစ်မှုအဖွဲ့ စတင်သတ်မှတ်မှု
လက်မှတ်ရ RBA စိစစ်သူများပါဝင်သည့် အရည်အချင်းမီသော ဝန်ထမ်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကျွမ်းကျင်သူအုပ်စုတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပါ။
စစ်ဆေးရေး ဆောင်ရွက်ရန်စာရင်းပေါ် အခြေခံ၍ အလုပ်ခွင်များကို ကိုယ်တိုင် အကဲဖြတ်မှု
04. အလုပ်ခွင်တွင်း စိစစ်မှုများ
Samsung Electronics စံနှုန်းများပေါ် အခြေခံ၍ အလုပ်ခွင်တွင်း စိစစ်မှုကို ဆောင်ရွက်ပါ
05. နောက်ဆက်တွဲ စီမံခန့်ခွဲရေး
စစ်ဆေးမှု ရလဒ်များကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ခွင်၏ စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ထံ မျှဝေပါ
စစ်ဆေးမှုပြီးသည့်နောက် တစ်ပတ်အတွင်း ထပ်မံဖြစ်မှု မရှိစေရန် နောက်ပိုင်း တိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် စီမံချက်များကို ချမှတ်ပါ
လူသားရင်းမြစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးကင်းရေးတွင် ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်သည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် အလုပ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ
အလုပ်ခွင်စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ဖြင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်ရမည့် အလုပ်များ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို လစဉ် စောင့်ကြည့်ပါ
လူ့အခွင့်အရေး သက်ရောက်မှု အကဲဖြတ်ခြင်း (HRIA)
လူ့အခွင့်အရေးများအပေါ် ဆိုးရွားသော သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်ခဲ့သည်၊ ချိတ်ဆက်နေသည့် သို့မဟုတ် ဖြစ်စေရန် ပါဝင်ခဲ့သည့် အမှန်တကယ်နှင့် အလားအလာရှိသော အန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ရန် လူ့အခွင့်အရေး သက်ရောက်မှု အကဲဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံး လူ့အခွင့်အရေး သက်ရောက်မှု အကဲဖြတ်ခြင်းကို 2018 တွင် ဗီယက်နမ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းအချိန်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်တွင်း ဓမ္မဓိဠာန်ကျသော အမြင်ရှုထောင့်တစ်ခု ထားရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ငန်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများတွင် ကျွမ်းကျင်သည့် အမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်း BSR (လူမှုရေး တာဝန်ယူမှုအတွက် လုပ်ငန်း) နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကြိုတင်စိစစ်မှုတွင် ခွဲခြားဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် ပြဿနာများကို မူဝါဒများ ရေးသားခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လုပ်နိုင်စွမ်းတည်ဆောက်ရေး ပရိုဂရမ်များ ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းအနှံ့တွင် အလုပ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း အပါအဝင် ကုစာရေး၊ လျော့ပါးရေးနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံများဖြင့် ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူ လုပ်ငန်းစည်းကမ်းကို RBA လုပ်ငန်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ချမှတ်ထားပြီး ပြင်ဆင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများထံ မျှဝေပေးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းအတွင်း လုပ်ငန်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာရန်နှင့် လေးစားလိုက်နာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုကိုလည်း ထုတ်ပေးပါသည်။ RBA ၏ အတည်ပြုချက် စံနှုန်းများနှင့်အညီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများကို ပြဿနာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး လိုအပ်သော တိုးတက်မှုများ လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူအားလုံးကို ပုံမှန် စောင့်ကြည့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့် 1 ပေးသွင်းသူများသည် ဘေးကင်းသော အလုပ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ ပေးသွင်းသူများ သို့မဟုတ် Samsung သို့ ပူးတွဲပေးသွင်းသူများအား တိုက်တွန်းအားပေးရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မကျေနပ်ချက် ဖြေရှင်းနည်း လုပ်ထုံးကို လုပ်ငန်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ UN လမ်းညွှန်မူများ၏ အပိုဒ်ငယ် 31 တွင် ပြဠာန်းထားသည့်အတိုင်း “တရားရေးရာနှင့် မဆိုင်သော မကျေနပ်ချက် လုပ်ထုံးများ၏ ထိရောက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်” အပေါ် အခြေခံထားပါသည်။ လူတိုင်းက သမားရိုးကျ တိုင်ကြားချက် တင်ပြနိုင်ပြီး တိုင်ကြားချက် တင်ပြခြင်းအတွက် ခွဲခြားခံရခြင်း သို့မဟုတ် လက်တုံ့ပြန်ခံရခြင်း မရှိရပါ။ လုပ်ထုံးမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး ပါဝင်နေသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များသည် လုပ်ထုံး၏ အဆင့်အားလုံးကို လေးစားလိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန် ကြိုးစားအားထုတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုင်ကြားချက် တင်ပြသူတိုင်း၏ အမည်ဝှက်ထားရေးကိုလည်း အာမခံပေးပါသည်။
မကျေနပ်ချက် သတင်းပေးပို့ရေး ချန်နယ်များ
အလုပ်ခွင်၏ ပင်ကိုလက္ခဏာများနှင့် ဒေသန္တရ အခြေအနေများကို ထည့်စဉ်းစား၍ မကျေနပ်ချက် ချန်နယ်များစွာဖြင့် စီစဉ်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
CCTV မရှိသည့် နေရာများတွင် ထားရှိသော အကြံပြုပုံးများ
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု သို့မဟုတ် အီးမေးလ်
ကုမ္ပဏီ အင်ထရာနက် အပလီကေးရှင်း
ကုမ္ပဏီ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရေး ချန်နယ်
※ ပြင်ပ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအတွက် ချန်နယ်များ- https://sec-audit.com | civilsociety@samsung.com
※ ပြင်ပ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအတွက် ချန်နယ်များ-
24 နာရီအတွင်း အသိပေးချက် လက်ခံရရှိမှု
ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြင်ပ ပါဝင်ပတ်သက်သူများသည် မကျေနပ်ချက်အားလုံးကို ကုမ္ပဏီထံ သတင်းပေးပို့ပါသည်
ကိစ္စရပ်အလိုက် မန်နေဂျာကို တာဝန်ပေးထားသည်
လက်ခံရရှိပြီးနောက်5ရက်
သတင်းပေးပို့ထားသော မကျေနပ်ချက်၏ အသေးစိတ်များနှင့် အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပါ
လိုချင်သော ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မကျေနပ်ချက်တင်ပြသူကို နားထောင်ပါ
အတည်ပြုထားသော အသေးစိတ်များနှင့်အညီ ပြန်လည်ကုစားရေး စီမံချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လက်ခံရရှိပြီးနောက်7ရက်
ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် ရလဒ်များကို ပေးပို့ပြီး မကျေနပ်ချက်တင်ပြသူထံမှ တုံ့ပြန်ချက် ရယူပါ
အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးကူညီမှုပေးခြင်းအပြင် အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် မူများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့် လေ့ကျင့်ပို့ချမှု၊ စွပ်စွဲခံရသူအပေါ် စည်းကမ်းအရ အရေးယူမှုကဲ့သို့ စီမံချက်များဖြင့် မကျေနပ်ချက်ကို ဖြေရှင်းပါသည်
※ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အကြောင်းရင်းကြောင့် အဆင့်တစ်ခုစီကို အချိန်ကာလအတွင်း မဆောင်ရွက်ပါက၊ မကျေနပ်ချက်တင်ပြုသူထံ အသေးစိတ် အကြောင်းရင်းကို အသိပေးရမည်
အခြားအရာများအနက် GRI စံနှုန်းပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုတစ်လျှောက် လုပ်သားနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ လေးစားလိုက်နာပုံအတွက် အသေးစိတ်ကို သတင်းပေးပို့ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ ယူကေ ခေတ်သစ်ကျွန်ပြုမှု အက်ဥပဒေအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်ပတ်လည် ထုတ်ပြန်ချက်များကို ခေတ်သစ် ကျွန်ပြုမှု မှတ်ပုံတင်ဌာနသို့ သတင်းပေးပို့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သြဇာအာဏာ အကြီးဆုံး လုပ်ငန်းနယ်ပယ် စံအမှတ်နှစ်ခုဖြစ်သည့် Human Rights Benchmark (CHRB) နှင့် Know the Chain (KTC) တို့၏ ရွေးချယ်ခံရသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ CHRB သည် ကုမ္ပဏီများအား လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လုပ်သား အခွင့်အရေး စည်းမျဉ်းများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး အကဲဖြတ်သော်လည်း KTC သည် အဓမ္မလုပ်သား ကိစ္စရပ်များကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ပါသည်။
ရေရှည်တည်တံ့ရေး သတင်းပေးပို့ချက် ယူကေ ခေတ်သစ် ကျွန်ပြုမှု ထုတ်ပြန်ချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းတွင်သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် လေးစားလိုက်နာမှု အစဉ်အလာကို အားပေးရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် မပြတ်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ မူဝါဒများနှင့် သင်တန်းပရိုဂရမ်များ ရေးသားရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးများတွင် ကျွမ်းကျင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ပြီး ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သော ပဏာမဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
2018 မှစ၍၊ နှစ်စဉ် ဗီယက်နမ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများစွာပါသည့် ဖိုရမ်များကို လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ 2020 တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့က VCCI (ဗီယက်နမ် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအသင်း) နှင့် VGCL (ဗီယက်နမ် အထွေထွေ လုပ်သား အဖွဲ့ချုပ်) တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ တတိယ ဖိုရမ်ကို လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီး "Covid-19 ကပ်ရောဂါ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် တန်ပြန်စီမံချက်များ၊ Covid-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါပြီးနောက် လူသားရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် နည်းပညာ ပြောင်းလဲမှု" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဖိုရမ်တွင် NGO များ၊ မီဒီယာများနှင့် ကျောင်းများမှ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဧည့်သည်များ၊ အပါအဝင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ 200 ကျော် ပါဝင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းမှု အဖွဲ့အစည်း (IOM) နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့် လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များက ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် ခေတ်သစ် ကျွန်ပြုမှုအကြောင်းနှင့် ကျင့်ဝတ်ညီသော ဝန်ထမ်းစုဆောင်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ဆွေးနွေးပွဲများစွာကို ဟန်ဂေရီ၊ ဆလိုဗားကီးယားနှင့် မလေးရှားရှိ အလုပ်ခွင်များတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ဆွေးနွေးပွဲများကို ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၏ လူ့အခွင့်အရေးများကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးမှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် အဓမ္မလုပ်သားများ အမြစ်ပျက်ပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အရေးကြီးမှုကို မျှဝေရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းအဖြစ် အသုံးချနိုင်ပါသည်။
ဂျာမဏီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီ (GIZ)၊ BMW Group နှင့် BASF ကဲ့သို့ မိတ်ဖက်များနှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်၊ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံရှိ ကိုဗော့သတ္တုတွင်း တူးဖော်ရေးတွင် ရှေ့ပြေးပရောဂျက်ဖြစ်သည့် “ကိုဗော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (C4D)” ကို စတင်ခဲ့သည်။ ပရောဂျက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေသန္တရ သတ္တုတူးဖော်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဘေးကင်းရေး သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် ဒေသန္တရ ကလေးများအတွက် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်း ကျောင်းအသစ်များ တည်ဆောက်ပေးခြင်းကဲ့သို့ ဒေသန္တရ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထံ စစ်မှန်သော တိုးတက်မှု ယူဆောင်လာပေးဖို့ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ပြုလုပ်နေပါသည်။
ကျင့်ဝတ်ညီသော ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ဆွေးနွေးပွဲများ ကိုဗော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပရောဂျက်
လုပ်သားနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ လုပ်သားနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ